No 8, Yadanar Street, Ward 3, Hledan, Kayamut Township,Yangon, Myanmar.
+95 1 503 705, +959250 703 185
အမျိုးသမီးများ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကဏ္ဍ
ရှေ့သို့အတူတကွဆက်လှမ်းခြင်း လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ Moving Forward Together (MFT) အဖွဲ့အစည်းသည် အသင်းဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သော –
ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဖယ်ကျဉ်ထားသော ကလေးနှင့် လူငယ်များအား အခြားစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများ၊ အသက်မွေးမှု ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများမှ တဆင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးခြင်း။
လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်ရန် စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများ (ဥပမာ- ကွန်ပျူတာအခြေခံ သင်တန်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း၊ စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စွမ်းရည်သင်တန်းနှင့် အခြေခံ စာရင်းကိုင်သင်တန်းများကျင်းပပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
MFT အမျိုးသမီး စီးပွားရေးနှင့် လူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေး ကဏ္ဍတွင် EDNA Myanmar, Sydney တက္ကသိုလ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်နှင့် အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် စီးပွားရေး အသိပညာပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဖွင့်ဖြိုးမှု မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်။
အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုနှင့် ရပ်ရွာဒေသအတွင်း တာဝန်သိလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လက်တွေ့လေ့လာမှုနှင့်အပြန်အလှန်လေ့လာရေးအစီစဉ်များ၊ လူငယ်တွေကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပို့အတွက် အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပက်သက်သောသင်တန်း တွေ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွမှု နှင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်
ကလေးသူငယ်များ နှင့် ရပ်ရွာဒေသအတွင်း နေထိုင်သော အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့် လူငယ်များ အတွက် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး အားကူညီပံ့ပိုးရာတွင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရပ်ရွာလူထု၊ ဒေသအာဏာပိုင်များ အစရှိသည့် လူတိုင်းအကျံုးဝင်ပညာရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍ နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သူများနှင့် နီးကပ်စွာ
ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းပြီးရှေ့သို့အတူတူ လုပ်အားပေး လုပ်ကိုင်လိုပါက အချိန်မရွေး ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
No 8, Yadanar Street, Ward 3, Hledan, Kayamut Township,Yangon, Myanmar
Phone : +95 1 503 705, +959250 703 185
Email : mftyouth@gmail.com
Facebook : facebook.com/MFT.org
© 2022 All Rights Reserved. Moving Forward Together
Powered By Source Code.